All Parents — Ohio Department of Job and Family Services U bood waxyaabaha ugu waaweyn
Waa maxay sababta uu run ahaantii aabuhu u sameeyo isbeddel...
Gobolka Ohio, haddii hooyada iyo aabuhu aanay isqabin marka ilmuhu dhasho, ilmuhu ma haysto aabbo sharci ah ilaa la aasaaso aabbannimada.
Dhammaan carruurtu waxay xaq u leeyihiin inay ogaadaan cidda ay yihiin, meesha ay ka yimaadeen, cidda ay waalidiintoodu tahay iyo dhammaan faa'iidooyinka la yimaada aasaasidda aabannimada.
Faa’iidooyinka Aasaasidda Aabannimada
Waa maxay faa’iidooyinka aasaasidda aabannimaada?
Aqoonsiga- Haddii aabannimadu aan la aasaasin aabuhu kuma qornaan doono shahaadada dhalashada ilmaha.
Caafimaadka- Caruurtu waxay ka faa’iideysan karaan iyagoo oggaanaya taariikda caafimaadka labada waalid ba, gaar ahaan haddii ilmuhu dhaxlo cudur caafimaad. Markuu dhakhtarka haysto taariikhda caafimaadka aabaha iyo hooyada labadaba, baahida gaarka ah ee ilmuhu waa la xallin karaa.
Gargaarka- Caruurtu waxay mudan yihiin taageerada labada waalidba si jir ahaan ah, dareen ahaan iyo dhaqaale ahaanba. Carruurta waalidka aan is qabin oo aan taageero ka helin waalidka aan ilmaha haynin ayaa aad ugu badan inay ku noolaadaan saboolnimo waxayna la kulmaan caqabado kale marka ay korayaan.
Faa'iidooyinka- Marka la aqoonsado aasaasidda aabannimada, carruurtu waxay xuquuq u lahaan karaan faa'iidooyinka kale sida caymiska caafimaadka, amniga bulshada, xuquuqda dhaxalka iyo faa’iidooyinka halgamayaashii hore.
Sharciga- Aasaasidda aabannimada waxay abuureysaa xiriir sharci oo u dhaxeeya aabaha iyo ilmaha. Waalidiinta sharciga ah waxay xaq u leeyihiin inay xiriir la yeeshaan ilmahooda, oo ay maxkamaddu caawimaad ka helaan oo ah booqashada iyo/ama haynta haddii loo baahdo.
Aasaasidda aabannimada waxay caruurtu ka caawisaa…
Inay la xiriiraan labada waalidba
Horumariyaan dareenka aqoonsiga
Ogaadaan taariikhda caafimaad ee labada qoysba
Helaan caymiska caafimaadka iyo faa'iidooyinka sida Amniga Bulshada iyo dhaxalka
Ka fogaadaan dabeecadaha khatarta sare leh
Aasaasidda aabannimada waxay hooyooyinka ka caawisaa…
Taageero u helaan xagga masuuliyadaha iyo go'aannada
La wadaagaan farxadda waalidnnimada
La qaybsashada kharashka koritaanka ilmaha
Aasaasidda aabannimada waxay aabeyaasha ka caawisaa…
Inay helaan xuquuq sharci ah si ay xiriir ula yeeshaan canugooda
U abuuraan xiriir dareen leh ee cunugooda kana mid noqdaan noloshooda
La wadaagaan dhinacooda qoyska ee ilmahooda
Waydiistaan maxkamadda inay ka caawiso arrimaha booqashada iyo xannaaneynta
Ma ogtahay in carruurta waalidka aan is qabin ay 4 jeer u badan tahay inay ku noolaadaan saboolnimmo?
Laakiin marka aabbayaashu ay ka qayb-qaataan nolosha carruurtooda, waxay samayn karaan farqi weyn. Cilmi-baaris ayaa waxay muujinaysaa in carruurta aabayaashood ay door firfircoon ka qaataan noloshooda ay:
2 jeer laga yaabaa in ay ka yaraato inay dugsiga sare ka tagaan
7 jeer ka yar tahay inay uuraysato markay tahay dhalinyaro
Inay yaraato iny ku xadgudbn daroogada iyo aalkolada
Yaraato in ay yeeshaan dhibaatooyin akhlaaq ah
Yaraato in ay la kulmaan xadgudub iyo dayacaad
Yaraato in ay ku dhacdo cayilka xad-dhaafka ah
Yaraato inay galaan xabsiga
BOGGA SU’AALAHA SOO-NOQNOQDA
Ma qabtaa wax su’aalo ah? Eeg bogga yaga Su’aalaha soo-noqnoqdo